“Voaary Diteratany”: hanehoana ny hakanton’ny tontolo | NewsMada
“Voaary Diteratany”: hanehoana ny hakanton’ny tontolo
Fampirantiana miavaka, heverina fa mahaliana, mandritra ity volana febroary ity, ny tanterahina etsy amin’ny Ivontoeran’ny kolontsaina malagasy (IKM) etsy Antsahavola. Efa maro ireo nahita ny hakanton’ny zava-bitan’ny mpanakanto ao, saingy entanina hatrany ireo maniry ny higoka zava-mahasoa sy mahafinaritra.
“Voaary Diteratany” ny lohahevitry ny fampirantiana, iarahana amin’i Padoue Rabenala sy i Gloria Rabarison. Voambolana tsy faheno matetika na mbola tsy re mihitsy ireo kanefa ahazoana sary an-tsaina ihany ny tian’ny mpanakanto hampitaina. Mpiangaly hosodoko izy ireo. Mampiavaka ity fampirantiana ity ny fanasongadinany an-tsary ireo singa madinika kanefa manan-danja eo amin’ny tontolo iainana. Eo koa ireo zavaboahary, tsy afa-misaraka amin’ny fampaharetana ny fihodin’izao tontolo izao.
Karazana fanentanana an-tsary mikasika ny tokony hanajana hatrany ny tontolo iainana sy ny zavamananaina no ataon’i Padoue sy i Gloria. Izay, rahateo, ny anton’ny fiaraha-miasan’izy ireo amin’ny fikambanana Green N Kool, mitovy tanjona sy vina eo amin’izay fanajariana ny manodidina sy ny tontolo iainana izay. Maneho ny hakanton’ireo zavatra vita amin’ny kojakoja sy akora efa nampiasana ity fikambanana ity, mandritra izao fampirantiana izao. Marihina fa misokatra ho an’ny rehetra, hatramin’ny 28 febroary, ny “Voaary Diteratany”.